China ALUMINUM COATED COIL factory sy mpamatsy | Alucosun
Ny alimo vita amin'ny loko mialoha dia manome loko miloko tena avo lenta amin'ny loko sy loko maro karazana. Azo alaina amin'ny sarimihetsika vita pirinty aza izy io mba hanomezana vokatra toy ny hazo-voa sy marbra.
Ny loko dia mety ho matt na glossy be, malama, anti-rangotra. Izy io dia misy ihany koa amin'ny ambaratonga aluminium sy alloys samihafa mba hahafahanao mandanjalanja ny endrika sy ny tanjaka. Alucosun manolotra coil mifono avo lenta avo lenta amin'ny karazana PE, HDPE, PVDF, NANO-PVDF ho an'ny fampiharana marobe.
Ny tontonana alucosun vita amin'ny alimika dia tsy mampiasa afa-tsy loko PVDF KYNAR 500 na FEVE fantatra amin'ny faharetany tsara. Ny toetra simika sy ara-batana tena tsara ananan'ireo loko hosodoko ireo dia nekena tsara sy voaporofon'ireo mpampiasa sy mpanao maritrano manerantany nandritra ny folo taona lasa ary ankehitriny dia mbola mitohy isan'andro ihany izany.
Alucosun dia manana fari-loko tsy manam-petra sy safidy vita farany marobe, mifanena amin'ny famoronana tsy manam-petra an'ny mpamorona sy ny mpanao mari-trano.
Ny panamasoana alucosun NANO-PVDF vita amin'ny aliminioma dia nopetahan'ny sosona loko Nano-PVDF, ary nanisy fantsom-panafody mangarahara NANO ambonin'ilay fantsona PVDF eo amin'ny hoditra aliminioma eo aloha. Afa-tsy ireo tombo-tsoa mahavariana amin'ny fantsona PVDF, ny NANO-PVDF dia avo lenta amin'ny fanoherana ny fandotoana, porofo simika ary fanadiovan-tena.
Araka ny asehon'ny mikraoskaopy, mikitoantoana ny velaran'ny PVDF raha milamina kosa ny iray amin'ny NANO-PVDF. Misaotra an'io, ny tany sy ny diloilo dia zara raha tafiditra ao anatiny ary mora entin'ny ranonorana izy ireo, mampihena be ny vidin'ny fikolokoloana.
VATO & MARINA
Ny hazo Alucosun sy ny andiana marbra dia mampifangaro ny hatsaran-tarehy voajanahary amin'ny hazo sy ny vato ary ny toetra mampiavaka ny tontolon'ny fangaro aluminium Alucosun, izay manome endrika vaovao an'ireo trano. Tombony lehibe iray hafa manoloana ny tena hazo sy vato ny hoe azo amboarina amin'izay endrika nangatahina ny fitaovana.
Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=18879716 ''
Alucosun borosy sy fitaratra andian-dahatsoratra manome alalana anao hanaiky ny antso estetika miaraka amin'ny lacquer mazava tsara fiarovana, mandritra izany fotoana izany, manome anao ny fahombiazan'ny tontonana vita amin'ny alucosun aluminium toy ny henjana miavaka sy ny fanoherana ny toetrandro. Amin'ny antsipirihany, ny andiana borosy dia mahatonga anao hahita ny alimika manta amin'ny tsara indrindra ary ny andian-fitaratra manome anao taratra mitovy amin'ny fitaratra fitaratra izay mora tohina amin'ny tsindry.
Noho ny vokany tsy manam-paharoa, ireo famaranana roa ireo dia malaza amin'ny haingon-trano sy fampirantiana anatiny mahazatra. Ankoatr'izay, Alucosun koa dia nanam-pahaizana anodized ho an'ireo famaranana roa ireo izay manolotra ny hevitry ny mpamorona amin'ny famolavolana ivelany miaraka amin'ny antoka maharitra.
H0 / I12 / H14 / H16 / H24 / H44
Mafy orina, metalic, Wooden, Mirror, Anodized, nisosa
Tafo, tafo, varavarana, fanaovana ACP, tafo, tafo mitafo
ao anatin'ny 15-25 andro dia miankina amin'ny haben'ny coil ny habeny
L / C tsy azo ivalozana amin'ny fahitana, na T / T
Previous: PANELAM-PANORAZANA STEEL
Manaraka: PANELAM-PANORANA ALUMINYUM
Coil mifono aluminium
Coil Aluminium mifono
Pvdf Coil Aluminium mifono